ပြည်တော်ပြန်တွေ တင်ဆောင်လာသော မှန်လုံကား မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းအဆင်းမှာ တိမ်းမှောက် - Linkardipa
ပြည်တော်ပြန်တွေ တင်ဆောင်လာသော မှန်လုံကား မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းအဆင်းမှာ တိမ်းမှောက်
ပြည်တော်ပြန်တွေ တင်ဆောင်လာသော မှန်လုံကား မြဝတီကော့ကရိတ်အာရှလမ်းအဆင်းမှာ တိမ်းမှောက် ထိုင်းပြန်မြန်မာ(10)ဦး ဒဏ်ရာရ (3)ဦးစိုးရိမ်ရ….
မြဝတီ-ကော့ကရိတ် အာရှ(တောင်ပေါ်လမ်း)နတ်စင်ကွေ့ ကုန်းဆင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ မှ နေရပ်ပြန်လာသည့် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ တင်ဆောင်လာသော မှန်လုံယာဥ် တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကြောင်း သတင်းရ၍ မြဝတီမြို့နယ် သင်္ဃန်းညီနောင်မြို့သစ် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့က သွားရောက်ပြီး
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ အမျိုးသား(၇) အမျိုးသမီး(၃) စုစုပေါင်း( ၁၀ )အား ​ကော့ကရိတ်ခရိုင် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများအနက်မှ အမျိုးသား(၂)ဦး အမျိုးသမီး (၁)ဦး သည်(စိုးရိမ်ရ) ကြောင်းလဲ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထံက သိရပါသည်။
အဆိုပါ မှန်လုံယာဉ်တွင် စီးနင်းလိုက်ပါလာသူ များမှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လာသည့် ရွှေ့ပြောင်းမြန်မာလုပ်သားများဖြစ်ပြီး မြဝတီနယ်စပ် ကျောက်လုံးကြီး စခန်းတွင် Quarantine ရက်ပြည့်၍ မြဝတီမြို့မှ နေရပ် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ပြန်စဉ် ယခုလို ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြင့် ကြုံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Quarantine Center မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
”ခုလိုကားမှောက်တာ ကားအဟောင်းတွေ သုံးတာကြောင့်ပါဘရိတ်မကောင်းတာပေါ့ဗျာ ကားကလည်း တော်တော်အိုနေပါပြီ” မျက်မြင်တွေ့သူက ပြောပါတယ်။
ဟိုးယခင်ကလည်း MOU လုပ်သားတွေ ထိုင်းနိုင်ငံထဲ ပို့ခဲ့စဥ်က ယခုလို သက်တမ်းလွန်ကားတွေ အသုံးပြုလို့ အက်ဆီးဒင့်ဖြစ် သေဆုံးသူအများအပြားရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
ပုံ-13-10-2021 ရက်နေ့ တောင်ပေါ်အာရှလမ်း ယာဥ်တိမ်းမှောက်မှု မြင်ကွင်း…..
ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ တင္ေဆာင္လာေသာ မွန္လုံကား ျမဝတီေကာ့ကရိတ္အာရွလမ္းအဆင္းမွာ တိမ္းေမွာက္
ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ တင္ေဆာင္လာေသာ မွန္လုံကား ျမဝတီေကာ့ကရိတ္အာရွလမ္းအဆင္းမွာ တိမ္းေမွာက္ ထိုင္းျပန္ျမန္မာ(10)ဦး ဒဏ္ရာရ (3)ဦးစိုးရိမ္ရ….
ျမဝတီ-ေကာ့ကရိတ္ အာရွ(ေတာင္ေပၚလမ္း)နတ္စင္ေကြ႕ ကုန္းဆင္းမွာ ထိုင္းနိုင္ငံ မွ ေနရပ္ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ မွန္လုံယာဥ္ တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားေၾကာင္း သတင္းရ၍ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ သဃၤန္းညီေနာင္ၿမိဳ႕သစ္ လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕က သြားေရာက္ၿပီး
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ အမ်ိဳးသား(၇) အမ်ိဳးသမီး(၃) စုစုေပါင္း( ၁၀ )အား ​ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအနက္မွ အမ်ိဳးသား(၂)ဦး အမ်ိဳးသမီး (၁)ဦး သည္(စိုးရိမ္ရ) ေၾကာင္းလဲ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕ထံက သိရပါသည္။
အဆိုပါ မွန္လုံယာဥ္တြင္ စီးနင္းလိုက္ပါလာသူ မ်ားမွာ ထိုင္းနိုင္ငံမွ ျပန္လာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္သားမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမဝတီနယ္စပ္ ေက်ာက္လုံးႀကီး စခန္းတြင္ Quarantine ရက္ျပည့္၍ ျမဝတီၿမိဳ႕မွ ေနရပ္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္စဥ္ ယခုလို ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖင့္ ၾကဳံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း Quarantine Center မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
”ခုလိုကားေမွာက္တာ ကားအေဟာင္းေတြ သုံးတာေၾကာင့္ပါဘရိတ္မေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ ကားကလည္း ေတာ္ေတာ္အိုေနပါၿပီ” မ်က္ျမင္ေတြ႕သူက ေျပာပါတယ္။
ဟိုးယခင္ကလည္း MOU လုပ္သားေတြ ထိုင္းနိုင္ငံထဲ ပို႔ခဲ့စဥ္က ယခုလို သက္တမ္းလြန္ကားေတြ အသုံးျပဳလို႔ အက္ဆီးဒင့္ျဖစ္ ေသဆုံးသူအမ်ားအျပားရွိခဲ့ဖူးပါသည္။
ပုံ-13-10-2021 ရက္ေန႔ ေတာင္ေပၚအာရွလမ္း ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈ ျမင္ကြင္း…..
(၇) ရက် သားသမီးများအတွက် အချစ်ရေးဗေဒင်ဟောကိန်း
မြန်မာ့ပထမဦးဆုံး Hollywood ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ( သို့) ဝင်းမင်းသန်း